TPLF: 'Humnoota of-tuultotaa bakka gara garaatii walitti qabameti biyya diigaa jira' - BBC News Afaan Oromoo
Koreen Giddu-galeessaa Adda Bilisa Baasaa Ummata Tigiraay (TPLF) kora atattamaa guyyaa tokko erga taa'een booda Roobii ibsa ejjennoo abbaa qabxii torbaa baasee tureen 'humnoota of-tuultotaa bakka gara garaatii walitti qabamanitu biyya diigaa jira' jedhe.
Kaanaaf ammoo adda durummaan paartii naannoo Amaaraa bulchaa jiru ADPtiin qeeqeera.
Ka'umsi ibsa kanaa ajjeechaa aanga'oota waraanaa Federaalaafi bulchiinsa naannoo Amaaraa irratti raawwatame yommuu ta'u, rakkooleen hedduu kana waliin walqabatanii fuula duraatti uumamuu malan biyyaafis ta'e naannoo Tigiraay irratti dhiibbaa qabaachuu malu gama gamuudhaan kallattiiwwaniifi murteewwan barbaachisoo akeekeera.
Lidatuu Ayyaaloo maaf siyaasa dhaabee laataa?
Qabxiiwwan ijoo ibsa Koree Giddu-galeesaa 'TPLF'
1. Yakka ajjeechaa aanga'oota raayyaa ittisa biyyaa irratti raawwatame humnoonni biyya keessaas ta'e biyya alaarraa yaadaafi gochaan kallatttiiniifi lafa jalaan hirmaannaa qaban qaama walabaa aantummaa biyyaa qabuun akka qulqullaa'uu; aanga'oonni tikaafi nageenyaa shira kana keessatti ga'ee qabanis ta'e itti gaafatamummaa isaanirraa eegamu ba'uu dhabuu isaaniitiin badii raawwatameef akka itti gaafatamaniifi bu'aan adeemsa kana qulqulleessuus yeroo yeroodhaan akka ummata Itoophiyaaf ifa ta'u waamicha dhiyeesseera.
2. Yeroo ammaa biyya diigaa kan jiru humnoota of-tuultotaa bakka gara garaatii walitti qabamanidha. Humni kun carraa argatee akka fedhe akka burraaqu kan taasise ammoo ADPdha. Waan kana ta'eefis ADPn badii qaqqabe maraaf, keessattuu aanga'oota dhaabichaa irratti ajjeechaa raawwatameef gadi fageenyaan qorachuun akka itti gaafatamummaan jiraatu gochuufi ejjennoo ifa ta'e fudhachuudhaan ummata Itoophiyaa dhiifama gaafachuu qaba.
Kanaan alatti rakkoowwan ofii dhokfachuudhaan badii raawwatame harki sadaffaan keeessa jira sababii jedhu dhiyessuudhaan ummata burjaajessuun dhaabbachuu qaba. Haala akkasii kana keessa jirachuu akka hin dandeenyes uummatichis hubateera. Kanaaf, ADPn dhimmoota hunaa irratti gadi fageenyaan erga gamaggamee booda ejjennoo ifa ta'e akka beeksisu Koreen Giddu-galeessaa ABUT waamicha dhiyeessa.
Kana ta'uu yoo baate garuu, ABUT humna akkasii kana waliin hojjechuufi qabsaa'uuf akka hin dandeenye beekamuu qaba.
3. Rakkoon bu'uuraa hanga ammaatti uumame ADWUI keessatti gartummaa wal dha'aa ta'e uumameefi qabsoo gartummaa ifatti beekameen gargaaramuun yaadawwan hirkataa ta'e qabatee qaama deemu ta'aa dhufuu isaati. Kana waan ta'eefis nageenyi biyya keenyaa akka wabii argatuuf ADWUIn amalaafi amantaa duraan qabutti deebiyuun kallattii ifa ta'eqabachuun akka qabsaa'uufi bara dhufutti ammoo akka Heera Mootummaatti filannoo biyyaalessaa gaggeeffamuu qabu akka Addaafi mootummaatti ejjennoo isaa ummata Itoophiyaaf akka ifa godhu Koreen Giddu-galeessaa kun gaafateera.
4. Humni raayyaa ittisa biyyaa sirna heera mootummaafi walabummaa biyyattii balaa kamirraa ittisuudhaaf itti gaafatamummaa heera mootummaa isinitti kenname yeroo kamiyyu caalaa tokkummaa keessoo keessanii cimsattanii nagaafi tasgabbii biyya keessanii eeguudhaaf ga'ee keessan akka baatan waamicha dhiyeessaa kana yeroo raawwatanittis 'TPLF' fi ummanni Tigiraay har'as akkuma kaleessaa isin waliin dhaabannee akka isin waliin qabsoofnu mirkaneessina.
5. ABUT humna heera mootummaa kabajuufi sirna federaalaa hordofu waan ta'eef rakkoo yeroo ammaa ummataafi biyya mudate, akkasumas mudachuu malu hambisuudhaaf humnoota kaayyoo walfakkaataa qaban biroo waliin waltajjiiwwan bal'aa uumuun qabsaa'uun atattamaan akka hojiitti hiikamuuf Koreen Giddu-galeessaa ABUT murteesseera.
6. Gaaffiiwwan gara naannootti guddachuu naannoo sabaafi sablammoota Kibbaatti ka'aa jiran bu'uura heera mootummatiin hiikamuu qabu. Kanaan alatti gaaffii ummataa humnaan ykn karaa biraatiin hiikuudhaaf yaaliin taasifamu gonkuma fudhatama hin qabu.
7. Mootummaan Federaalaa biyya kana keessatti nageenyi amansiisaan akka mirkanaa'u, seerriifi ol-aantummaan seeraa akka kabajamu, mirgoonni namoomaafi dimokiraasii lammilee akka mirkanaa'aniifi heerri mootummaafi sirni heera mootummaa osoo hin sharafamiin akka kabajamuu qabu Koreen Giddu-galeessaa 'TPLF' irra deebiin hubachiiseera.
Image copyright Fuula FB 'TPLF'
Namoonni siyaasaa akkamitti akka ibsa TPLF kana ilaalan BBCn iyyaafateera.
Dr. Adam Kaasee dhimma Bulchiinsaafi Dimokiraasii irratti xiinxalu, anaaf murteessan wantota rakkoo Itoophiyaa gara fuula duraa ta'aniif ibsichi kaasedha jedhu.
Fakkeenyaaf, ADWUIn akka paartiitti ykn akka addaatti gara fuula duraatti eessa dhaqa? Filannoon bara dhufuu maal ta'uu qaba? Akkasumas dhimmoota gaaffii Sidaamaa ilaallatan irratti xiyyeeffachuutu caala. Isaan kun waan gara fuula duraatti ilaalanidha waan ta'eef murteesoodha jedhan.
Namoonni hedduun ajjeechaa aanga'ootaa tibbana raawwatameen gara duubaa ilaalaa jira malee biyyattiidhaaf dhimmoota fuulduratti eeggatanirratti fuulleffachuutu murteessaadha.
"ADWUIn caasaa duriidhaan humna duraan qaba ture yeroo ammaa qaba jechuudhaaf rakkisaadha. Garuu wanta kana ifa gochuun 'TPLF' qabxii isa jalqabaadha."
ADP waliin hin hojjennu isa jedhu caalaa, humnoota haaraa biroo waliin hojjenna kan jedhutu dubbii ijoo ibsichaadha akka Dr. Adam jedhanitti.
"Waliin hojjechuu ilaalchisee, hanga ammaattiyyu waliin hojjechaa jiru jechuunuu ni ulfaata. Yeroo hudnaa wal komachuufi himachuurratti dabarsu.
Humnoota biroo waliin kan jedhu yeroo ilaallu, paartilee ADWUI ala jiranis ta'u danda'a. Kana garuu ilaaluuf jirra."
Yeroo ADWUIn akka addaatti jiru gara paartii tokkoottin jijjiirama jedhaa jirutti kun uumamuun, Addichi maal gochuu qaba kan jedhu gaaffii uumeera jedhan.
Ejjennoofi yaada qabaniin 'TPLF' warra siyaasa sabummaa irratti hundaa'e deggeran waliin walitti dhiyaata. Kun kan Sidaamaa gara fuula duraatti uumamu, ABIN fi ABO waliin sadarkaa yaadaatti walitti dhiyaatu.
Hata'u malee, paartilee gurguddoo naannolee Oromiyaafi Amaaraa irraa yeroo ammaa aangoorra jiraniin alatti warra akka Sidaamaafaa waliin walitti dhufeenya uumee paartii cimaa dhiibbaa uumuu danda'u ta'uu dhiisuu mala.
Obbo Lidatuu Ayaaloo ammoo ibsa 'TPLF' kana akka ofiin rakkoo uumamerraa bilisa of taasisuun ADP qofaatti quba qabaa jirutti ilaalu.
TPLF rakkoon biyyattii dhugumaan kan isa yaaddessu taanaan, ceepha'uufi komiidhaan otoo hin taane paartii keessatti qabsoo gochuun gara bal'achuun furama jedhan.
TPLF warra kaan waliin hojjechuuf qophii tahuun, akkasumas rakkoowwan bu'uuraa biyyattii kanarraan gahaniif shoorri isaas guddaa tahuu amanuudhaan rakkoo kana hiikuun kan danda'amu jedhan Obbo Lidatuun.
Rakkoon kuni erga TPLF aangoo irraa bu'ee kan uumame fakkeessuuf yaaluun dogoggora durii irraa barachuu dadhabuu isaa agarsiisa. Qaama rakkichaa gatii taheef qaama furmaataasaa tahuu qaba.
Akka Obbo Lidatuun jedhanitti, miseensonni ADWUI bu'aa offii isaarra bu'aa biyyaaf dhimmammu taanaan, ummata waggaa 27 guutuu miidhan tajaajiluuf, dhugumaan gaabbbaniiru taanaan dhiisanii bahuu otoo hin taane yeroon akka tokkootti dhaabachuu qaban har'a.
"Ibischi ammoo kan inni fulleefate ADP akka diinaatti kaa'uun humnoota biroo ADWUI ala tahanii, adeemsa isaa fudhatan wajjin hojjechuuf fedha akka qabudha kan ibsame."
Kunimmoo yaada ummata Tigraayidha jedhee hin amanu kan jedhan Obbo Lidatuun, ummatichas ummata Itoophiyaa irra adda baasa.
"Ilaalcha sirrii tahe mitii, rakkoo bu'uuraati. Ummanni Tigiraayis ilaalchi ibsa kanaa sirrii akka hin taane hubatee ifachuu qaba." Ummanni Tigraayiifi Amaaraa garuu rakkoo amma jiruu keessaa bahuu barbaadu malee walitti bu'insaafi muddama keessa galuuf fedhii hin qaban. Ummanni fedhii akkasii hanga hin qabaanne, qaamoleen fedhii kana qaban waan barbaadan gochuu hin danda'an jedhan Obbo Lidatuun.